Wararka Maanta & Dabaysha Siyaasadeed ee Dalka ka Curatay – Radio Daljir
Oktoobar 4, 2017 12:55 g 1
Indhawaalaba mowjadaha siyaasadda Soomaaliya ayaa noqday kuwo hirarkoodu ay wada gaareen dhammaan maamulada dalka. Dabayshu markii hore waxa ay ka dul curatay maamulka Hirshabeelle, waxaana lagu sumadeeyey dabayl ay kicisay DFS oo dhinac ah iyo maamulada dalka oo dhinaca kale ah.
Haddaba, anaga oo maanka ku hayna shirka la isku khilaafsanyahay, laakiin aan weli la hubin, ee Kismaayo, aan isku dayo in aan dul istaago wararka maanta iyo maamul kasta.
Puntland Maxaa ka Cusub?
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland oo maantay ka dhoofay Garoonka diyaaradaha ee Garowe ayaa mar uu warbaahinta la hadlayay waxaa uu aad u dhaliilay shirka la magacbaxay wadatashiga maamulada ee uu martigaliyay Madaxweynaha Jubaland, Md. Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe).
MKX Camay waxa uu tilmaamay in shirka lagu baaqay ee Kismaayo aysan Soomaali dani ugu jirin, sidaas awgeedna loo baahanyahay in la joojiyo.
Dhanka Madaxweyne Gaas, ilo weereedyo si gooni ah iigu waramay, xogogaalna u ah xaalka dalka, ayaa ila qaybsaday in Madaxweyne Gaas ay haystaan culaysyo siyaasadeed oo kale duwan, kuwaas oo si dadban iyo si toos ahba uga dalbanaya in Gaas uu ka baaqdo shirka Kismaayo. Wararku waxa ay intaas ku darayaan in ay suurtogal tahay in Madaxweyne Gaas uu ka baaqdo gogosha Kismaayo, xaaladaha ka jira iyo buuqa ka kacsan wareejinta Dekadda Bossaso dartood.
Culaysyada Gaas haysta ayaa siyaasiyiinta iyo waliba ganacsatada gobolku ku tilmaameen culayso ay ugu weynyihiin kuwa ka imaanaya Imaraadka Carabta, ahna culayso dan dhaqaale u ah Puntland, laakiin lid ku ah siyaasadda fog ee Soomaaliya.
Cadaado iyo Galmudug maxaa ka Socda?
Sidii aan shalay idin la qaybsaday, aana u saadaaliyey in arrinta Galmudug ay dhinac u dhici doonto, waana tan ay Maxkamada Sare ee Galmudug soo saartay go’aan ay ku taageertay xilkaqaadista Madaxweyne Xaaf. Intaas kuma ay harin e, Maxkamaddu waxa ay xilkii ka xayuubisay Madaxweyne Kuxigeen Carrabeey, Guddoomiyaha Baarlamaanka Cali Gacal Casar, iyo waliba Kuxigeenkiisa koowaad, Md. Xareed.
Guddoomiye Yaxye Shiikh Cali, Guddoomiyaha Maxkamada Sare ee Galmudug, oo ku saxiixan go’aanka Maxkamada Sare ayaa sheegay in Kusimaha Madaxweynaha Galmudug uu yahay Kuxigeenka 2aad ee Guddoonka Baarlamaanka Galmudug.
Sidii la filayey, Mudane Xaaf oo la hadlay warbaahinta gudaha, ayaa isla caawa qaadacay go’aanka Maxkamada Sare ee Galmudug, waxa uuna ku adkaystay in uu yahay Madaxwaynaha sharciga ah ee Galmudug. Md. Xaaf oo siyaasadda Galmudug caawa cirka ku sii shareeray waxa uu yiri “Galmudug kama jirto Maxkamad Sare.”
Sida la qiyaasayo, wararka Cadaado laga helayaana ay taageerayaan, Mudane Xaaf ayaa asna la filayaa in uu berri subax u safro Kismaayo iyo kaqaybgalka gogosha maamul goboleedyada ee uu fidiyay Madaxweyne Axmed Madoobe.
Kismaayo Ayana maxaa ka Socda?
Kismaayo oo ay ka socoto qabanqaabada gogosha Madaxweyne Axmed Madoobe, ayaa hadana waxaa la isla dhexmarayaa in ay barbarsocoto mugdi, shaki, iyo madmadow soo kala dhexgalay DFS iyo Jubaland. Laakiin su’aal siyaasiyiintu ay isweydiinayaan baa ah sababta Jubaland ku kalifaysa qabashada shirka Kismaayo iyo siyaasad ahaan ahmiyadda shirku uu u xanbaarsanyahay Jubaland. Halkaas waxaad mooddaa in Jubaland ay xogteeda si fiican u ilaalisay, mana jiraan warar madaxbannaan ama kuwo dowladeed oo illaa iyo hadda soo darooray, aan ka ahayn in Jubaland ay gogol u fidisay maamulada dalka.
Xaalka Maamulka Koonfur Galbeed?
Inkasta oo Madaxweyne Shariif Xasan uu wali Imaaraadka Carabta ku maqanyahay, waxaa madaxweynaha indhawaalaba ku socday kacdoon siyaasadeed oo aad u xooggan, uuna weli loodin la’yahay. kacdoonka waxaa hormuud ka ah xildhibaano iyo siyaasiyiin door weyn ku leh siyaasadda Koonfur Galbeed. Siyaasiyiintaan ayaan ka gabban in ay caddeeyaan mowqifkooda, kaas oo ah in bartamaha bishaan Aktoobar uu Baarlamaanka Koonfur Galbeed kalsoonida kala noqdo Madaxweyne Shariif Xasan.
Kacdoonka Shariif Xassan ku socda ayaa dadka qaar waxa ay galinayaan tuhun, ayaga oo leh “Shariif Sakiin waxa uu leeyahay khibrad dad wadasho oo aan miisaan lahayn, sidaas darteed waa ay adagtahay in uu maro waddadii ay mareen madaxda Hirshabeelle iyo Galmudug.”
Warar aan caawa ka helay siyaasiyiin ka agdhow Villa Soomaaliya ayaa tuhun ka muujinaya in Shariif Xasan uu kaalin ku leeyahay qorshaha gogosha Kismaayo iyo waliba ajandaha gogosha. Waana arrintaas bay siyaasiyiintu ila qabsadeen tan kalliftay saluugga ay DFS saluugsantahay shirka Kismaayo.
DFS iyo Doorkeeda Siyaasadda Dalka
Xubnaha safka hore ee baarlamaanka DFS ayaa ila qaybsaday in xukuumadda Farmaajo, marka laga reebo mowjadda Qalbidhagax, ay hawlo fiican ka qabatay siyaasadda arrimaha dibada, laakiin ay ka gaabisay tan gobolada dalka, ama xataa haddii saas aysan dhab ahayn, uu shacabku saas hadda wax u tuhmayo. Xildhibaanada ayaa ku sii daray in gaabiskaas eeddeeda uu leeyahay Madaxweyne Farmaajo, maadaama RW Kheyre loo arko nin aan dadka iyo dalkaba kala aqoon, hadana sii luminaya kalsoonida shacabka.
Wararkii ugu danbeeyey ee Villa Soomaaliya ayaa sheegaya Madaxweyne Farmaajo uu berri ku wajahanyahay Suudaan, asaga oo aan weli ka hadlin xaaladda dalka, xataa aan weli shacabka la qaybsan siyaasaddiisa la dhaqanka maamul goboleedyada iyo xiriirkooda Imaaraadka Carabta.
Siyaasiyiinta qaar baa ayana Villa Soomaaliya farta ku fiiqiya, kuna eedaynaya in ay ka danbayso qalalaasaha siyaasadeed ee galaafatay madaxda Hirshabeelle iyo Galmudug. Saas oo ay tahay weli ma muuqato far laga hayo DFS ama tallaabooyin lala xiriirin karo xiisadaha maanta ka abuuran dalka. Taas baddalkeeda, mar haddii la dareensanyahay in Sacuudiga iyo DFS ay heshiiyeen, walloow uusan weli soo bixin war cad oo arrimaha Qadar ku saabsan, Soomaalida badankeedu hadda qalalaasaha dalka waxa ay dusha ka saarayaan Imaaraadka Carabta, oo shacabku hadda u dareensayahay in ay Itoobiya kaga dheeraysay xiisad-abuurka Soomaaliya iyo iskudirka siyaasiyiinta Soomaalida. Siyaasi diiday in aan magaciisa sheego ayaa ila qaybsaday in “awal meeshii siyaasiga qalalaasaha wadaa uu Addis ka aadi jiray, hadda waa in uu Dubai iyo Abu Dhabi sii istaago.”
Saas oo ay tahay iyo waxa tuhun isdabamaraya, ilo weereedyo ka agdhow Villa Soomaaliya ayaa ila qaybsaday in DFS qorshaheedu uu yahay mudada ka dhiman sannadka 2017 in la helo maamulo Soomaaliyeed iyo Dowlad Federaal ah oo isku duuban, is oggol, si kasta ha ku yimaadeen, wado kastana ha loo maro e, si loo xoojiyo haykalka dowladnimo ee Soomaaliya sannadka 2018 kahor.
Boqor Abdifatah Ahmed 4 years ago
Shacabka yaan lanaban dhexdhexaad noqda radio daljirow dawlada somaliya waxbaynu ku leenahay ganacsatadayada iyo waxgardkub waa somali